स्वास्थ्य र जीवनशैली Archives - Page3of 20 - Naya Patrika
पुरुषमा ब्रेस्ट क्यान्सरको संकेत
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, २५ चैत - – निप्पल र आसपासको भागमा एलर्जी र खटिरा आई लामो समयसम्म उपचार गर्दा पनि निको नभएको अवस्थामा सचेत हुन जरुरी हुन्छ । किनकि, त्यस्तो समस्या पुरुषका लागि स्तन क्यान्सरको संकेतसमेत हुन सक्छ । – निप्पल या त्यसवरिपरिको क्षेत्रमा कडापन महसुस भएमा पनि त्यो खतराको संकेत हुन सक्छ । यस्तो कडापन...
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, २५ चैत - पुरुषहरू आफ्नो दाह्रीलाई फरक–फरक स्टाइल दिन रुचाउँछन् । पछिल्लो समय दाह्री–जुँगा फेसन प्रचलनमा छ । अहिलेका युवापुस्ता पूर्ण रूपमा दाह्री काट्नभन्दा पनि यसको स्टाइल दिन रुचाउँछन् । प्रायः हल्का दाह्री राख्ने गर्छन् । यी हुन् पुरुषका दाह्री–जुंगाका स्टाइल : फुल बियर्ड यस्तो कटमा दाह्री–जुँगा अनुहारको सबै भागमा राखिएको हुन्छ ।...
पाचन प्रक्रियालाई चुस्त बनाउन
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, २५ चैत - जीवनशैलीले पाचन प्रक्रियामा भूमिका खेल्छ । खाना, पानीको मात्रा, फाइबरयुक्त खाना, नियमित व्यायामजस्ता कुराले पाचन प्रणलीमा सीधा प्रभाव पार्छ । फाइबरयुक्त खाना पाचन प्रक्रियालाई बलियो बनाउन फाइबरयुक्त खाद्यपदार्थको प्रयोग अत्यावश्यक हुन्छ । त्यसका लागि अनाज, फलफूल, फाइबरयुक्त तरकारीको प्रयोग गर्नुपर्छ । फाइबरयुक्त खानाले पाचन प्रणालीलाई बलियो बनाउनुका साथै कब्जियतको समस्या...
इन्फ्लुएन्जाविरुद्धको खोप ल्याउने सरकारको तयारी
अर्जुन अधिकारी/नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, २५ चैत - एक करोड प्रभावितलाई खोप दिन १५ अर्ब आवश्यक मौसमी रुघाखोकी (इन्फ्लुएन्जा)ले कडा रूप लिन थालेपछि त्यसको न्यूनीकरणमा सरकार लागेको छ । मौसमी रुघाखोकीबाट नेपालका एक करोड नागरिक प्रभावित भएको भन्दै सरकारले इन्फ्लुएन्जाविरुद्धको खोप ल्याउने तयारी थालेको हो । विश्वका धनी देशहरूमा मौसमी रुघाखोकीविरुद्धको खोप सञ्चालन रहे पनि नेपालमा आर्थिक अभावका...
बच्चासँग व्यवहार कस्तो गर्ने ?
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, २४ चैत - बच्चाको उमेर हेरेर उनीहरूसँग व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । ४–५ वर्षको उमेरलाई जीवनको फाउन्डेसनका रूपमा पनि लिइन्छ । यो उमेरको बच्चाले जस्तो सिक्यो, जीवनभर उसमा त्यही छाप रहिरहन्छ । यही समयमा बच्चाको मस्तिष्कको विकास हुन्छ । यो उमेरमा पोसिलो खानेकुरा, राम्रो वातावरण भएन भने बच्चालाई जीवनभर असर गर्छ । बच्चा के...
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, २४ चैत - बेलुकाको खाना चाँडै खानुपर्छ । खाना खानेबित्तिकै सत्नुहुँदैन । खाना खाएको २ घन्टापछि मात्र सुत्नुपर्छ । खाना खानेबित्तिकै सुत्ने बानीले मोटोपन बढाउँछ । थोरै खाने, दिनमा तीन–चारपल्ट खाने बानी राम्रो हो । सधैँ नियमित रूपले खाना खानुपर्छ । तौल घटाउन व्यायाम गर्नुपर्दछ । बिहान सबेरै हिँड्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।...
स्पोर्टस् इन्जुरी भएमा के गर्ने ?
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, २४ चैत - व्यायाम र खेलकुद स्वास्थ्यका लागि अत्यावश्यक छन् । नियमित व्यायामले शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ रहन मदत गर्छ । प्रविधिमा निर्भरता बढेसँगै शारीरिक कसरतको मात्रा घट्दो छ । दिन प्रतिदिन मानिसमा नयाँ–नयाँ रोग र संक्रमण देखिन थालेका छन् । त्यसैले, शारीरिक कसरतका लागि अहिले मानिसले अलग्गै समय छुट्याउनुपर्ने अवस्था छ...
रासस, बाजुरा, २३ चैत - बाजुराको गौमुल गाउँपालिका–४ मानाकोटमा रहेको कीर्तिचौर माविमा हाल २५० छात्रा अध्ययन गर्दै आइरहेकी छन् । तर पनि उनीहरुले नियमित रुपमा पठनपाठन गर्न पाउँदैनन् । नियमित पठनपाठन गर्नका लागि उनीहरु बञ्चित हुने गरेको पाइएको छ । महिनावारी हुँदा उक्त विद्यालयका कम्तीमा २० जनाभन्दा बढी छात्रा पाँच दिनसम्म विद्यालय आउँदैनन् । महिनावारी...
बिहान होइन बेलुकी नुहाउनुस्
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, २३ चैत - बिहान नुहाउनुहुन्छ कि बेलुकी ? यो तपाईंको व्यक्तिगत रुचिको विषय हो । यद्यपि, प्रायः मानिस बिहान नुहाउन मन पराउँछन् । जुन स्वस्थ जीवनका लागि फाइदाजनक पनि हो । तर, तपाईंलाई यो कुरा सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ कि बिहानभन्दा बेलुकी नुहाउनु बढी फाइदाजनक हुन्छ । यी हुन् बेलुकी नुहाउँदाका फाइदा :...
उमेरअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, २३ चैत - नियमित स्वास्थ्य परीक्षण जीवनशैली व्यवस्थापनको यो एक महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर, धेरै मानिसले नियमित स्वास्थ्य परीक्षणमा ध्यान दिएका हुँदैनन् । कुनै गम्भीर समस्या भए मात्र अस्पताल धाउने अधिकांशको बानी छ । यस्तो प्रवृत्तिले गम्भीर रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ । किनभने उच्च रक्तचाप, मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रोलबाट ग्रसित ५० प्रतिशतभन्दा...
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, २३ चैत - पछिल्लो समय योग लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ । बिहान उठेर मर्निङवाक जाने, योग ध्यान गर्ने मानिसको संख्या बढ्दो छ । धेरैले योगलाई स्वस्थ जीवनको प्रमुख आधारका रूपमा स्विकार्छन् । पछिल्लो समय योगलाई विभिन्न रोगको उपचार माध्यम बनाउने गरिएको छ । विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले पनि योगलाई स्वस्थ जीवनको प्रमुख आधार मानेका...
मेकअप ट्रेन्डमा न्युड र वाटरप्रुफ
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, २३ चैत - गर्मी बढ्दै छ । मेकअप सामग्री र मेकअप पनि मौसमअनुसारकै प्रयोग गर्ने प्रचलन छ । केही समयपहिला हेभी मेकअपको ट्रेन्ड थियो । गर्मी र वर्षात्को समयमा विशेषगरी न्युड र वाटरप्रुफ मेकअपको प्रचलन बढ्दो छ । नेचुरल देखिन सहयोग पु-याउने भएकाले पनि धेरैको रोजाइमा यस्तो मेकअप पर्ने गर्छ । के हो...
१० घन्टाभन्दा बढी सुत्दा स्लिपिङ डिसअर्डर
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, २२ चैत - मानव शरीरलाई आरामको आवश्यकता पर्छ । जसका लागि नियमित सुत्नु या निदाउनु जरुरी हुन्छ । मानिसको स्वास्थ्यअनुसार कम वा लामो समय सुत्नुपर्ने हुन्छ । बच्चालाई अलि बढी निदाउनुपर्ने हुन्छ । उमेर बढ्दै गएपछि कम निदाउँदा पनि फरक पर्दैन । स्वस्थ मानिसले दैनिक ६ देखि ८ घन्टा निदाउन जरुरी हुन्छ ।...
सेतो पानी बग्ने समस्याको परिणाम
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, २२ चैत - पछिल्लो समय प्रायः महिलामा सेतो पानी बग्ने समस्या देखिन थालेको छ । सानै उमेरका महिलामा पनि यस्तो समस्या देखिन थालेको छ । विशेष गरी अस्वस्थकर जीवनशैली र खानपानका कारण यस्तो समस्या बढेको हो । सेतो पानी बग्नेको सामान्य र जटिल अवस्था हुन्छ : सामान्य अवस्था कहिलेकाहीँ कारणविनै सेतो पानी...
गर्मीमा लङ आउटर
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, २२ चैत - गर्मी मौसम सुरुवातसँगै लङ आउटर प्रयोगकर्ताको संख्या पनि बढ्दो छ । लङ आउटर महिलाले प्रयोग गर्ने ड्रेस हो । यसले फेसनेबल देखाउनुका साथै छालालाई घामबाट बचाउनका लागि पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यस्तो आउटर शारीरिक बनावटअनुसार छनोट गरेमा अझ बढी आकर्षक देखिनका लागि मद्दत पुग्छ । लङ आउटरको सहायताले...
अनुहारको फ्याट हटाउन
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, २२ चैत - कतिपयको छाला अत्यधिक चिल्लो हुने गर्छ । अनुहारमा बढी फ्याट भएमा यस्तो समस्या हुन्छ । उमेर बढ्दै जाँदा यस्तो समस्याले अनुहारको सुन्दरतामै ह्रास आउने गर्छ । तर, यस्तो समस्याबाट मुक्त हुनका लागि घरेलु उपचारको पनि सहायता लिन सक्नुहुन्छ । त्यसका लागि गर्नुस्, यस्ता गतिविधि : कपडाले पुछ्नुस् पहिला मनतातो पानीमा...
कपालले दिन्छ रोगको संकेत
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, २२ चैत - लामो समयसम्म कपाल कडा भएमा त्यो थाइपरथाइरायडिज्म रोगको संकेत हुन सक्छ । यस्तो रोगले थाइरायड ग्लान्डलाई बढी सक्रिय बनाउँछ ।जसका कारण तीव्र गतिमा तौल घट्ने पनि समस्या हुन्छ । दैनिक कपाल झर्ने समस्या भएमा त्यो डायबिटिज या अलोपेसिया अरेटाको लक्षण हुन सक्छ । अलोपेसिया अरेटा यस्तो रोग हो जसले कपाल...
यस्तो समस्या देखिएमा गर्नुपर्छ सिजरियन डेलिभरी
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, २१ चैत - पछिल्ला केही वर्षदेखि शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माउने महिलाको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दो छ । खासमा यौनांगबाट बच्चा जन्माउँदा आमालाई पीडा हुने डरले शल्यक्रिया गरेको पाइन्छ । तर, यसरी बच्चा जन्माउँदा दीर्घकालीन रूपमा आमा र बच्चा दुवैलाई समस्या पर्न सक्छ । त्यसैले, बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र सिजरियन डेलिभरीको सहारा लिँदा आमा र...